Ministeera Nagaa Itoophiyaa: ‘Galmeen meeshaalee waraanaa yeroo dhiyootti ni eegala’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMinisteera Nagaa Itoophiyaa: ‘Galmeen meeshaalee waraanaa yeroo dhiyootti ni eegala’
Labsii bulchiinsa fi to’annoo meeshaalee waraanaa ji’oota muraasa dura paarlaamaa biyyattiin ragga’e hojiirra oolchuuf qophiiwwan garaagaraa taasifamaa akka jiru Ministeerri Nagaa beeksise.
(bbcafaanoromoo)—Afriikaatti ji’a namootni meeshaalee waraanaa seeran alaa qaban itti beeksisan yookin qaama seeraaf galchan /Africa Firearms Amnesty Month/ sababeeffachuun, Ministeerri Nagaa Komishinii Poolisii Federaalaa walin ta’uun hojiilee bulchiinsaafi to’annoo meeshaalee waraanaa irratti hojjechaa jiran ilaalchisuun ibsa laataniiru.
Afriikaa keessatti meeshaalen waraanaa seeraan alaa yakka salphaadhaa hanga gochaa shororkeessummaa kan itti raawwatamu akka ta’e Ministirri Nagaa Mufariyaat Kaamil himan.
Waggoota lamaan darbanittis meeshaalee waraanaa seeraan alaa ittisuu akkasumas nageenya mirkaneessuuf hawaasa fi dhimmamtoota biroo hirmaachisuun hojjetamaa akka ture himan.
“Hojimaata hanga ammaa jiruun dhaabbileen daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa to’achuu qaban haala barbadamun sirna teekinolojiin kan hin deeggaramnedha,” kan jedhan ministirri nagaa Mufariyaat Kaamil, “mootummaan dhimmichaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuun ogeeyyii sadarkaa federaalaatti jiran leenjisuun dhiyeenyatti hojii galmee kan eeggallu ta’a,” jedhan.
Dabalataan leenjicha ogeeyyii naannolee fi bulchiinsa magaalotaa keessatti argamanif kennuunis labsicha sadarkaa biyyaalessaatti hojiirra oolchuuf hawaasa hirmaachisuun kan hojjetamu ta’uu himan.
Labsichi biyyattii keessatti olaantummaa seeraa mirkaneesuun hawaasa nagaa fi tasgabbiin isaa mirkanaa’e uumuu kan kaayyefate akka ta’es himaniiru.
Daddabarsi meeshaa waraanaa seeran alaa kan itti fufu yoo ta’e nageenyi bade tokko tokkorratti akka ka’u haala mijataa kan uumu ta’uu kan himan ministirittiin hawaasni mootummaa walin ta’uun akka tumsu gaafatan.
Maaltu hojjetamaa jira?
Gorsaan ministira nagaa Miinaas Fissihaa, “Itoophiyaan ALA bara 2004 waliigaltee ittisaafi to’annoo meeshaalee waraanaa xixiqaa – ‘Nairobi Protocol’ jedhamu mallatteessitus waggoota dheeraaf sadarkaa biyyaatti seera osoo hin qabaatin turuushee himan.
Haa ta’u malee xiyyeeffannoo mootummaan biyyattii erga yeroo dhiyootii as kenne bu’ureeffachuun Amajjii bara 2012 labsiin bulchiinsa fi to’annoo meeshaalee waraanaa lakk 1177/2012 akka bahu taasifamuusaa dubbatan.
Labsii kana hojiitti hiikuf dambiiwwan fi qajeelfamootni qophaa’anii xummuramuu isaanis gorsaan ministira nagaa Miinaas Fissihaa himaniiru.
“Dirqamaafi itti gaafatama nageenya lammiilee eeguu kan qabu mootummaa akka ta’e ni amanama.
Haa ta’u malee lammiileen duudhaalee hawaasummaa fi aadaa qabanin, dhimmoota nageenyaa qabanin akkasumas sababa hojii isaaniitin meeshaa waraanaa akka qabatan dirqama yeroo itti ta’u, akkaataa seerarra taa’een meeshaa waraanaa akka qabatan ni heeyyamamaaf,” jedhan.
Hanga ammaattis dhimmoota ijoo sadi, seerota bahan diriirsuu, daddabarsa meeshaa waraanaa seeran alaa irratti qorannoo taasisuu fi garee tekinoloojii hundeessuun galmee fi to’annoo meeshaalee waraanaa bifa ammayyaan adeemsisuuf haalli akka mijatu taasifamuu isaa himan.
Hojii to’annoo fi galmee meeshaalee waraanaa adda durumaan Komishiniin Poolisii Federaalaa akka hojjetu kan himame yemmuu ta’u, komishiniiwwan poolisii naannolee fi magaalotaa bakka bu’ummaa Komishinii Poolisii Federaalaan kennamef bu’ureeffachuun akka hojjetanis himameera.
Haatahu malee ibsa har’a kennameen haala meeshaa waraanaa seeraan alaa biyyattii keessa jiru, akkasumas galmeen yoom akka eegalu wanti qabatamatti himame hinjiru.
Eenyutu meeshaa waraanaa hidhachuu dandaya?
Labsichi eenyu meeshaa waraanaa hidhachuu danda’a akkasumas hin danda’u kan jedhu akka ibsu kan himan, gorsaan ministira nagaa Miinaas Fissihaa, “namootni guutummaatti yookin gariin dandeettii seeraa hin qabne, kallattii garaagaraan ajaja mana murtiitin yookin ammoo sababa hanqina qaamaatin akka hin fayyadamne kan dhorkaman” meeshaa waraanaa fayyadamuu akka hin dandeenye seerichi kan himuu ta’uu Obbo Miinas dubbatan.
Labsichi namootni meeshaa waraanaa qaban galmeessisanii heeyyama qabaatanii akka fayyadaman taasisuun cinatti, namootni meeshaa waraanaa tokkoo ol qaban waajjiraalee poolisii naannoo isaanii jiranitti akka deebisan kan taasisu ta’uu, gorsaan kun himaniiru.
Galmeessi meeshaalee waraanaa akkaataa sagantaa Komishiniin Poolisii Federaalaa baasuun kan raawwatamu akka ta’es himameera.
OMN: GRD- Fulbaana 30 boodaa fi tarkaanfilee itti aanan (Onk 7, 2020)